Tsy mampiasa ny 737 MAX an’ny Boeing ny Caribbean Airlines, saingy mbola manontany foana ireo mpandeha · Global Voices teny Malagasy
Tsy hisy ny valiny mahafa-po mandra-pamoaka ny fehin'ny famotorana
Voadika ny 21 Marsa 2019 14:04 GMT
Boeing 737 MAX 8, maodely mitovy, tafiditra amin'ny fianjeran'ny zotram-piaramanidina Ethiopiana (10 Marsa 2019) sy Lion Air (29 Oktobra 2018). Sary avy amin'i Liam Allport, CC BY 2.0.A.
Raha tojo olana tao ivelan'ny renivohitr'i Ethiopia, Addis Ababa ny zotra-piaramanidina Etiopiana Boeing 737 MAX 8 tamin'ny 10 Martsa 2019, dia ity no fianjerana Boeing 737 MAX faharoa tao anatin'ny dimy volana. Tamin'ny volana Ôktôbra 2018, nisy zotra Lion Air nianjera tao amin'ny ranomasimbe tany Indonezia minitra vitsy taorian'ny niaingany. Samy tsy nisy velona ny mpandeha rehetra tao anatin'ireo lozam-piaramanidina roa ireo.
Niteraka ahiahy mikasika ny fahamendrehana sy ny famoronana ary ny rindrambaikon'ny fiaramanidina ireo loza ireo, ka manampahefana iraisam-pirenena maro misahana ny fiaramanidina no nandray fepetra hampiato ny MAX tsy hiasa an'habakabaka.
Ny 12 Martsa, roa andro taorian'ny nianjeran'ny zotram-piaramanidina Etiopiana, nisioka ny Federal Aviation Administration Amerikana fa “tsy mampiseho olana momba ny zava-bita ary tsy manome antony handidiana ny fampiatoana ny fiaramanidina” ny fanadihadiana natao tamin'ilay fiarahamanidina:
VAOVAO FARANY #FAA Fanambarana mikasika ny @Boeing 737 MAX
Ny ampitso, nanavao ny fomba fijeriny izy, mandidy ny fampiatoana vonjimaika ny Boeing 737 MAX “taorian'ny dingana fanangonana tahiry sy porofo vaovao voahangona tao amin'ny tranonkala […] miaraka amin'ireo tahiry avy amin'ny zanabolana nohavaozina vao haingana sy hita ao amin'ny FAA androany maraina.”
Mbola manan-kery ny fampiatoana eo am-piandrasana fanadihadiana lalindalina kokoa, izay ahitana fanadihadiana ireo tahiry momba ny sidina nataon'ny fiaramanidina sy ny fandraketam-peo teo amin'ny mpanamory. Na izany aza, toa tsy nisy tamin'ireo nanome toky ny mpandeha avy any Karaiba, izay miahiahy fa efa nanambara teo aloha mikasika ny fikasany hanofa ity maodely fiaramanidina ity ny Zotram-piaramanidina Karaiba- Caribbean Airlines (CAL), fiaramanidina mpitatitra entana fahatelo lehibe indrindra mampitohy an'i Karaiba sy Amerika Afovoany.
Taorian'ny fianjeran'ny zotra-piaramanidina Ethiopiana, namoaka lahatsoratra ny Trinidad Express izay mitondra ny lohateny hoe “Miteraka tahotra ny Tetik'asa CAL hanofa fiaramanidina 12″, izay tsy hita amin'ny aterineto intsony. Namaly ny tatitra tamin'ny alalan'ny fanambarana tamin'ny 12 Martsa ny Minisitry ny Vola ao Trinidad sy Tobago, Colm Imbert:
Tokony hanatitra entana amin'ny Desambra 2019 ny B4oeing 737 MAX 8 ka manana fotoana betsaka ny CAL hanaovana fifanarahana hafa raha hita fa tsy azo antoka ity maodely fiaramanidina ity.
Miantso ny lahatsoratra ho “mampivadi-po”, nanamarika i Imbert fa mampiasa fiaramanidina mitovy amin'izany ny American Airlines amin'ny “fampiasana ny zotrany mankany Trinidad sy mivoaka an'i Trinidad isan'andro” ary “raha tena raiki-tahotra ireo mpandeha, dia azo antoka fa mety hiahiahy ny handeha […] amin'ny zotra-piaramanidina izay efa manana ny Boeing 737 MAX 8 amin'ny tolotra tsy tapaka izy ireo “.
Ny ampitso, nandràra ny Boeing 737 MAX 8 sy 9 tsy hivezivezy eny amin'ny habakabakany ny Civil Aviation Authority (CAA) ao Trinidad sy Tobago (CAA) mandra-pahita fa azo antoka ny fampiasana azy ireo. Noraisin'ny gazety ho toy ny karazana valifaty izany – saingy ankoatra izany, inona marina ny olana amin'ny 737 MAX?
Raha jerena ny fitoviana misy eo amin'ny zotra-piaramanidina Ethiopiana sy ny fianjeran'ny Lion Air, toa mipetraka amin'ny Rafitra Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) ny fanamby.
Eto amin'ity rafitra ity, dia misy ny fitaovana namboarina hamantarana raha mihantona ny fiaramanidina. Ity karazana “fihantonana” ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny maotera; midika izany fa tsy mamoaka ainga ilaina hisidinana milamina ny fiaramanidina. Mitranga izany rehefa mihoatra ilay antsoina hoe “zorom-panafihany” ny elatry ny fiaramanidina – ary amin'ny Boeing MAX 8, mamaly amin'ny alàlan'ny fampidinana ny oron'ny fiaramanidina mba hamerenana ny rivotra hiverina eo amin'ny elatra sy hisorohana ny fihantonana.
Ao anatin'ity lahatsary YouTube Skillshare (15:52) ity, manazava ny mpanamory iray hoe nahoana ny rafitra MCAS no tena manan-danja “mba hanampy ireo mpanamory fiaramanidina ao anatin'izany toe-javatra manokana izany, izay mitoetra amin'ny zorom-panafihana avo, hafainganam-pandeha miadana, miaraka amin'ny fitaratra mihidy – sy ny sidina entin-tanana – mba hampidina ny orona … “
Nampahanfantara ity maodely vaovao 737 ity ho toy ny fanatsarana “tsy misy fikitihana” tamin'ireo fiaramanidiny tranainy ny Boeing tany am-boalohany – vahaolana izay manafaka ny zotra-piaramanidina amin'ny fandaniana goavana amin'ny fanovàna. Tamin'ireo maodely fiaramanidina Boeing teo aloha, nampiofanina ny ekipa eo amin'ny fanamoriana mba hanapaka ny “stabilisateur (mpampifandanja)” sy hanamory ny fiaramanidina amin'ny tanana raha mitranga izany; midika izany hoe mamadika fanahapan-jiro roa.
Ao amin'ny MAX 8, mbola afaka manapaka ny “automatisation (fampandehanana tsy baikona)” sy mifehy indray ny fiaramanidina ny mpanamory, saingy maro tamin'ireo mpanamory fiaramanidina iraisam-pirenana nitondra ity maodely ity no nitaraina noho ny tsy fisian'ny vaovao avy amin'ny Boeing. Na izany aza, tsy misy fehin-kevitra voafaritra afaka – na tokony sintonina momba ny fahamendrehan'ny fiaramanidina raha tsy ampahafantarina ny vahoaka ny tatitra momba ny fianjeran'ny Ethiopian Airlines.
Raha nampitombo ny fiankinan-dohany amin'ny sidina fehezin'ny solosaina ny Boeing mba hahatonga ny fiaramanidina ho azo antoka sy hampihenana ny asan'ny mpanamory, ny vaovao diso sy ny fampianarana diso momba ny zorom-panafihana – tahaka ny mety nitranga tamin'ny 737 MAX 8 – dia mety hampanano-sarotra kokoa ny asan'ny mpanamory.
Hamaha ny olana amin'ny alalan'ny fanovàna ny endrika sy hampitombo ny tahan'ny fampiofanana ny fahatsapana ankapobeny hita avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria ao amin'ny faritra. Namoaka fanambarana ny Caribbean Airlines izay manamarika, ankoatra ireo zavatra hafa, ny zava-bitany tsara eo amin'ny resaka fiarovana fa “tsy mitondra fiaramanidina Boeing 737 MAX-8″ izy ireo ary “raha toa ka tsy mahavita manaja ireo fitakiana tena henjana ny fiaramanidina Boeing 737 MAX-8, dia tsy ho afaka hampidirina ao amin'ny zotra velively”..